my kitchen my life: pasta များကို လေ့လာခြင်း
pasta များကို လေ့လာခြင်း
ပါစတာ pasta ဆိုတာ paste ပါစတီ ဆိုတဲ့ အီတလီစကားက ဆင်းသက်လာတဲ့ အီတလီ ရိုးရာ အစားအစာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါစတာကို အဓိကအားဖြင့် durum wheat flour ( Semolina ) စမိုလီနာ ဂျုံနဲ့ ရေ ရောပြီး လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်ဥ ကတော့ optional လို့ ပြောရမှာပါ။ ပါစတာ အမျိုးအစားပေါင်း မြောက်မြားစွာရှိတဲ့ အထဲက Spaghetti and Macaroni စပါဂတီနဲ့ မိုက်ခရိုးနီ ပါစတာ တွေ ကလူသိများတယ်။ ပါစတာထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ နေရာ ဒေသ အပေါ်မူတည်ပြီး ပါစတာနာမည်တွေ အမျိုးအစား ကွဲပြား နိုင်ပါတယ်။ ပါစတာ ပုံသဏ္ဍန်တွေကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်ဆိုတော့ နာမည် မှတ်ရခက်ပါတယ်။ ပါစတာ ပုံသဏ္ဍန်တွေဟာ မုန့်တီလို ၊ နန်းရှည်လို ကျနော်တို့ မျက်စိထဲမှာ မြင်နေပေမဲ့ နက်ခ်တိုင် လိုပါစတာ၊ ပိုက်လို ပါစတာ၊ နန်းပြားလို ပါစတာ၊ ခေါင်းလောင်းပုံစံ ပါစတာ၊ လိပ်ခုံးပုံစံပါစတာ၊ ပန်းပွင့်လိပ်ပြာပုံစံ ပါစတာ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပါစတာပုံသဏ္ဍန်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အတို နဲ့ အရှည် ၊ အခုံးအခွက် နဲ့ အခေါင်းပေါက် ပုံစံတွေကိုအဓိက ထားတွေ့ရမှာပါ။ နောက် ပါစတာ အသားကို dried pasta နဲ့ fresh pasta လို့ ခွဲထားပါသေးတယ်။
ပါစတာတွေရဲ့ ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး ဆောစ့် sause တွေ ပမာဏ အနည်းအများ အကျဲ အပစ် ကစားပေးရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ ခပ်ရှည်ရှည်ပါစတာတွေနဲ့ ခပ်ပါးပါးပါစတာတွေကို ( oil, cream, tomato, etc..) ဆောစ့် သင့်တင့်ရုံထည့်ပြီး ဆောစ့်နဲ့ ပါစတာ တွဲနေအောင် ချက်ပေးရပါမယ် ။ဒါမှ ခက်ရင်း fork ထဲမှာ ဆောစ့်နဲ့ ပါစတာ တွဲပါပြီး အရသာရှိရှိ လွယ်လွယ်ကူကူ စားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခပ်တိုတို နဲ့ အခေါင်းပေါက်ပါတဲ့ ပါစတာတွေကတော့ အသား၊ အသီးအနှံတွေနဲ့တွဲချက်ရင် ပိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။ pasta အများစုကတော့ cream sauce, tomato sauce, meat sauce တွေနဲ့ စားကြတာများပါတယ်။ ဘယ်လိုစားချင်တယ် ဆိုတာက ကိုယ့်အခွင့်အရေးဆိုတော့ ကို ကြိုက်သလို မှာယူ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက် ချက်ပြုတ်စားသောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆောစ့် sauce တွေ၊ accompaniments တွဲဖက်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ပါစတာ က ကွာလတီ quality မကောင်းရင်၊ ပါစတာကို ကောင်းကောင်း မပြုတ်တတ်ရင် ထွက်လာတဲ့ ပါစတာပွဲက စားလို့ဘယ်လိုမှ ကောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရေ ၃ လီတာ3liters , 1 teaspoon of salt ဆား တစ်ဇွန်း ဟာ ပါစတာ ၂၅၀ ဂရမ် ပါစတာ အတွက်လို့ စံချိန်ပေးထားပါတယ်။ ဆားရေ ပွက်တာနဲ့ ပါစတာ ထည့်ပြီး ပါစတာ ခရင်းနဲ့ မွှေပေးရပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ပါစတာတွေ အချင်းချင်း ကက်သွားတတ်၊ လုံးသွားတတ်ပါတယ်။ ပြုတ်ချိန်ကို အညွန်းအတိုင်း လိုက်နာရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူတို့ပေးထားတဲ့ အချိန်ထက် ၁ မိနစ် ၂ မိနစ်လောက် လျှော့ပြီး ပြုတ်ကြည့်တာ ပိုကောင်းတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ပြုတ်ချိန်က များသောအားဖြင့် ၁၂ မိနစ်နဲ့ ၈ မိနစ်ကြားမှာ ရှိပါတယ်။ ပါစတာ ချစ်သူတွေကတော့ Al Dente အယ်လ်ဒန်တေး လို့ ခေါ်တဲ့ ပါစတာ ( ကျွန်တော်တို့အတွက် မကျက် သေးတဲ့ )ကို ကြိုက်ကြပါတယ်။
အလုပ်များတဲ့ ဟိုတယ်တွေ ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေကတော့ ပါစတာကို ကြိုပြုတ်ထားတတ်ပါတယ်။ ပြန်ပြီးတော့ အပူပြန်ပေးမယ်ဆိုရင် လည်း သတိထားရပါတယ်။ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေထဲ ပါစတာ ကို ခဏ ဆိုရုံလေး ထည့်ပြီး ချက်နေတဲ့ ဆောစ့်ထဲ လောင်းထည့်တာ ပိုပြီး လွယ်ကူပါတယ်။
packages of fresh lasagne sheets, ravioli, gnocchi,etc
extra-virgin, virgin and light olive oil
red wine, white wine and balsamic vinegar
parmesan, pepato and romano cheese
bacon, prosciutto and pancetta
sun-dried and semi-dried tomatos
canned sardines, canned tuna, canned salmon
canned tomatoes, canned tomato puree,canned tomato paste
good quality bottled tomato pasta sauce
canned or bottled artichoke hearts
fresh herbs such as oregano, basil, thyme, etc
garlic, chillies and onion
ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေ ရှိရင် ပါစတာတစ်ပွဲ အလွယ်တကူ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေ ရှိရမယ်လို့တော့ ကံသေကံမ မပြောရဲပါဘူး။
လူသိများတဲ့ ပါစတာ နာမည်တွေကတော့
angel hair ( capelli d'angelo) : small, circular nests ofavery fine, delicate pasta.
bow ties( farfalle): also known as butterflies: solid and dense withafrilled edge.
bucatini( tubular spaghetti): long and hollow likeastraw, know as perciatelli in Sicily.
curly lasagne( papperdelle or lasangette): long strips of wide, flat pasta withascalloped edge.
elbow macaroni( chifferi): short, small, curved, hollow shape
fettuccine: ribbon pasta slightly wider than tagliolini and thinner than tagliatelle.
fettuccine, spinach: green component in the classic pagliaefieno, "straw and hay" pasta.
gnocchi: dumplings usually made of potato or semolina: can be boiled , baked or fried
linguine: known as flat spaghetti or little tongues because of its shape
macaroni: generic name forawide variety of short and thick hollow pasta.
orecchiette ( little ears) : originallyahomemade specialty from Puglia, hasasoft centre and chewy rim.
penne: italian word for pen: short, straight macaroni cut on the diagonal, either smooth or grooved.Ziti areafat penne and pennoni arealarge variation.
ravioli, agnolotti: small pasta cases enclosingasavoury or sweet filling.
rigatoni: large, wide chewy macaroni, usually ridged on the surface.
risoni: regional name forarice-shaped pastina( tiny pasta) similar to orzo, stelline and fedelini.
shells, sarge( conchiglie grandi) and small ( conchiglie): named because they look like conch shells: oblong shape pinched at the ends, available in both grooved and smooth varieties and in many sizes.
spaghetti: the shape that comes to mind when pasta is mentioned: "little strands" originally from Naples. Spaghettini isathin version and vermicelli thinner still.
spirals, large( fusilli ) and small ( fusillini ): corkscrew or spiral-shaped short pasta:alonger variation is called fusilli lunghi: rotini areawider, shorter, fatter corkscrew.
tagliatelle:along ribbon pasta about 8mm in width, sometimes sold in nests resembling egg noodles
tortellini:apasta ripieni ( stuffed pasta) similar to ravioli but made in the shape ofaring or small cap.
ပါစတာဟင်းပွဲတွေကို Ala Carte အာလာကဒ် အဖြစ်ရောင်းချကြသလို Lunch , dinner တွေမှာ မပါ မဖြစ် ပါရတဲ့ ဟင်းတစ်ပွဲအဖြစ် ဟိုတယ် တော်တော်များများက ထည့်သွင်းတတ်ကြပါတယ်။
Ref :The Australasian women's weekly
Posted by leo mark at 7:09 AM